पादबाट पनि फैलिन सक्छ ‘कोरोना’ ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पादबाट पनि फैलिन सक्छ ‘कोरोना’ ?
कोरानो भा’इरस फैलिने सामान्य तरीका भनेको हाछ्युं गर्दा र खोकीबाट निस्कने ससाना थोपालाए नै मनिएको छ। मुख र नाकबाट निस्कने साना ती थोपाका माध्यमबाट भाइ’रस बाहिर आउन सक्छ । त्यसपछि कुनै ब्यक्तीसँगको सिधा सम्पर्कबाट पनि यो फैलिन सक्छ । सं’क्रमित हातबाट कुनै बस्तु छुँदा पनि भाइ’रस केही समय ती बस्तुमा रहन सक्छ र त्यहाँबाट अन्य ब्यक्ती त्यसको सम्पर्कमा आउन सक्छ । एजेन्सी/नेपालसमाचारपत्र